Ogaden News Agency (ONA) – Waxaa jira su’aalo loo baahan yahay inay ka jawaabaan shirkadaha Shidaalka
Waxaa jira su’aalo loo baahan yahay inay ka jawaabaan shirkadaha Shidaalka
Posted by ONA Admin	/ December 31, 2011
Marwo Désirée Pethrus oo ah xubin baarlamaan ka tirsan xisbiga Christian Democ. Party ayaa ugu baaqday xukuumadda Sweden inay cadaadis saarto Midowga Yurub si loo baadho xadgudubka xuquuqda aadanaha ee Itobiya ay ka wado Ogadenya.
“Waxaan ogsoonahay inay ciidamada Itobiya ilaaliyaan shirkadaha shidaalka baadha, mana hubo inay shirkadahaa ku dadaalaan intii karaankooda sidii xadgudubyadaa loo joojin lahaa” ayay tidhi Marwo Désirée Pethrus.
Xisbigeeda wuxuu ka mid yahay isbahaysiga midig raaca ah ee xukuumadda dhisay. Inkastoo bay tidhi ay jiraan arima badan oo muhiim ah in laga wadahadlo, hadana waxaa loo baahan yahay in si aan gabasha lahayn loola hadlo xukuumadda Itobiya. Waxay sidoo kale hadala kulkulul ka sheegtay shirkadaha shidaalka ee hawlaha ka wada halkaa.